Gudigii maamul u sameynta Koonfur Galbeed oo gaaray Baydhabo & amaanka loo adkeeyey * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay gaaray xubndihii guddiga dhismaha maamul u smaeynta gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee kala ah: Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Xubnahan waxaa sidoo kale la socda labadii mas’uul ee dhinacyadii isku hayey Baydhabo u saxiixay heshiiskii bishii June ka dhacay Muqdisho ee ay dowladda Soomaaliya ger-wadeen ka aheyd.
Maxamed C/nuur Mad-deer iyo C/fataax Geeseey oo markii hore kala matalayey maamuladii iska soo horjeeday ee 3-da iyo 6-da gobol, balse hadda heshiis ah ayaa ka mid ah mas’uuliyiinta maanta lagu soo dhaweeyey Baydhabo.
Ammaanka degmada Baydhabo ayaa si aad ah loo adkeeyay; iyadoo la hakiyey gaadiika iyo ganacsiga, waxaana waddooyinka lagu soo dhoobay ciidamada dalka Itoobiya ee AMISOM ka tirsan iyo sidoo kale ciidamada booliiska kuwa milateriga dowladda Soomaaliya.
Sababta loo xiray ganacsiga iyo wadooyinka Baydhabo ayaa aheyd iyadoo laga feejignaa rabshado ay sameeyaan taageerayaasha Madoobe Nuunow, kuwaasoo diidan maamulka 3-da gobol, islamarkaana doonaya maamul 6 gobol ah.
Dadweyne taageersan maamulka 3-da gobol ayaa xubnaha wafdiga kusoo dhaweeyay Baydhabo, kuwaasoo watay calaamado ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan guddigan oo ka shaqeyn doona sidii maamul ay u yeelan lahaayeen gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Shir jaraaid oo ay ku qabteen xarunta maamulka saddexda gobol ayay ugu sheegeen taageerayaashooda inay u yimaadeen sidii maamul loogu sameyn lahaa saddexda, ayna howshan hormuud ka tahay dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale, dadka kasoo horjeeda imaashaha wafdigaas ee Baydhabo ayaa bannaanbax ku sameeyay xarunta maamulka 6-da gobol ee uu hoggaaminayo Madoobe Nuunoow, kuwaasoo watay dharka hiddaha iyo dhaqanka iyo boorar uu ku masawiran yahay Madoobe Nuunoow.
Labo maalmood ka hor ayaa R/wasaare C/weli Sheekh Axmed kulan sagootin xubnahaas ugu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana guddigaas oo ka kooban 22 xubnood laga sugayaa iney soo diyaariyaan qaab dhismeedka maamulka Koonfur Galbeed ee saddexda gobol.